OTU ESI ACHỌ USORO NKE WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Kpebie obosara obosara nke Windows 10
Ịwụnye sistemụ ahụ n'ime ihe ndị dị ugbu a aghọwo usoro dị mfe na nke a pụrụ nghọta. N'otu oge ahụ, n'ọnọdụ ụfọdụ nsogbu na-ebili, dịka enweghị disk diski nke e mere atụmatụ iji wụnye Windows na ndepụta nke mgbasa ozi dịnụ. N'isiokwu a, anyị ga-aghọta ihe kpatara nke a na otu esi edozi nsogbu a.
Sistemụ arụmọrụ nwere ike ọ gaghị "ahụ" disk diski na ikpe abụọ. Nke mbụ bụ ọrụ ụzụ nke ụgbọelu ahụ n'onwe ya. Nke abụọ bụ enweghị mgbakọ na ọkwọ ụgbọala SATA. A ghaghị iji onye ọzọ dochie disk ahụ na-adịghị mma, ma anyị ga-atụle n'okpuru otu esi edozi nsogbu ahụ na onye ọkwọ ụgbọala.
Ihe Nlereanya 1: Windows XP
Na Win XP, ọ bụrụ na nsogbu na diski n'oge arụnyere, usoro ahụ ga-aga BSOD na njehie nke 0x0000007b. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ígwè arụkọghịrị nke "oses" ochie, na kpọmkwem - na enweghị ike ikpebi mgbasa ozi. N'ebe a, anyị nwere ike inyere ma ọ bụ ntọala BIOS, ma ọ bụ iwebata ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa na-arụ ọrụ OS.
Gụkwuo: Njehie njehie 0x0000007b mgbe ị na-etinye Windows XP
Ihe Nlereanya 2: Windows 7, 8, 10
Asaa, yana nsụgharị nke Windows, ọ bụghị dị ka ndị nwere ike ịdaba na XP, ma nsogbu yiri nke ahụ nwere ike ibili mgbe ị na-etinye ha. Isi ihe dị iche bụ na n'ọnọdụ a, ọ dịghị mkpa itinye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ n'ime nkesa nkesa - a pụghị 'tụfuo ha' na ogbo nke ịhọrọ diski ike.
Mbụ ị ga-achọ ịnweta ọkwọ ụgbọala ziri ezi. Ọ bụrụ na ị lere anya na otu isiokwu banyere XP, ị maara na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala ọ bụla nwere ike ibudata na saịtị DDriver.ru. Tupu ebugharị, chọpụta onye mepụtara na ihe nlereanya nke chipset motherboard. Enwere ike ime nke a site na iji usoro AIDA64.
Njikọ iji budata ndị ọkwọ ụgbọala SATA
Na ibe a, họrọ onye nrụpụtara (AMD ma ọ bụ Intel) ma budata onye ọkwọ ụgbọala maka sistemụ arụmọrụ gị, n'ọnọdụ AMD,
ma ọ bụ akpa ngwugwu e depụtara maka Intel.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịtọtu faịlụ ndị ahụ, ma ọ bụrụ na onye nchịkọta agaghị achọpụta ha. Iji mee nke a, ị nwere ike iji mmemme 7-Zip ma ọ bụ WinRar.
Ndị ọkwọ ụgbọala si "acha uhie uhie" na-etinye n'ime otu nchekwa. Wepụ ha na folda dị iche.
Ọzọ, ịkwesịrị ịmepe ndekọ aha ya ma chọpụta na ndị nchịkọta akụkọ onye ahụ akara nke chipset gị. N'okwu a, ọ ga - abụ:
Ihe nchekwa na ngwugwu ngwugwu Packages Drivers SBDrv
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịhọrọ nchekwa na ya na nju omimi nke usoro arụnyere na idetuo faịlụ niile na kọmputa USB ma ọ bụ CD.
N'ihe gbasara Intel, a na-ebudata ebe obibi site na saịtị ahụ, site na nke ọ dị mkpa iji wepụ ihe nchekwa ederede ọzọ na aha aha ya na ike. Na-esote, ịkwesịrị ịkwanye ya ma detuo faịlụ ndị ga-esi na ya gaa na mgbasa ozi nwere ike iwepụ.
Ịmalite ịwụnye Windows. Mgbe anyị na-ahọrọ draịvụ ike, anyị na-achọ njikọ na aha ahụ "Download" (ihuenyo na-egosi Win7 installer, na asatọ na iri, ihe niile ga-abụ otu).
Push bọtịnụ "Nyocha".
Họrọ ụgbọala ma ọ bụ USB flash drive site na listi wee pịa Ok.
Tinye nlele n'ihu "Zoo ndị ọkwọ ụgbọala na ekwekọghị ngwaike kọmputa"wee pịa "Na-esote".
Mgbe ị wụnye ọkwọ ụgbọala, diski ike anyị ga-apụta na listi mgbasa ozi. Ị nwere ike ịnọgide na nwụnye.
Dịka ị nwere ike ịhụ, ọ dịghị ihe ọjọọ na enweghị disk diski mgbe ị wụnye Windows, naanị ị ga-achọ ịma ihe ị ga-eme n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ. O zuru ezu ịchọta ọkwọ ụgbọala dị mkpa ma mee omume ndị a kọwara n'isiokwu a. Ọ bụrụ na mgbasaozi ka na-edoghị anya, gbalịa dochie ya na amara mara mma, ọ nwere ike ịbụ na e merụrụ ahụ.